Majlisnni Oromiyaas akkuma ka duraa Zulmii nurratti dalagaa jira - Oromia Shall be Free
bilisummaa 5 days ago	Leave a comment
Komii warra hajjii baranaa: Majlisa Oromiyaas tahee ka duraanii ummata saamuu fii malee, ummata tajaajiluuf hin dhabbanne jedhu hujjaajoonni. Qarshii kuma dhibba lamaa fii afurtama nurraa guurratanii doolaarri hin jiruu hin deemtan ja’anii bakkatti nu facaasan. Dhimma kanaaf osoo oliif gad joorruu waan harkaa qabnu dhadhawanne jirra. Kuni ummata saamuuf jaarame malee ummata taliguuf ka dhabbataameti jedhu. Qotee bulaa miskiina hajjii godhuuf waan qabuu gurgure akkatti itti taphachaa jiru.
Tags Hajjii hujjaajoota Islaama Majlisa Makka muftii muslima Oromoo umraa
Previous Faaydaa yookiin bu’aa tiinii/shookaa kana beeytuu laataa?
Next Gammoojjii fii baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalota keessa galaa jirra